Home Wararka SEIT Hir-Shabeelle oo Baladweyne ku qabanaya xulashada HOP#010, HOP#030 & HOP#066
SEIT Hir-Shabeelle oo Baladweyne ku qabanaya xulashada HOP#010, HOP#030 & HOP#066
Magaalada Baladweyne xarunta Gobolka Hiiraan oo ah Deegaan Doorashada labaad ee DG Hir-Shabeelle waxaa maanta ka dhaceysa Doorashada saddex kursi oo kala ah: HOP#010, HOP#030 & hop#066.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban Heer Dowlad-Goboleed ee SEIT Hir-Shabeelle ayaa diiwaangeliyay musharixiinta u tartameysa kuraastaan oo dacwad iyo khilaaf ka dhan ah uu ka taagan yahay Magaalada Baladweyne.
Guddiga Doorashooyinka heer Federaal ee FEIT ayaa qoraal uu soosaaray waxa uu ku joojiyay doorashada saddexdaan kursi balse SEIT Hir-Shabeelle ayaa u muuqda in go’aankaan uu dhinac maray maadaama abaabulka iyo dhaqdhaqaaqa Doorashada uu wato.
Saddexda Kursi waxaa ku kala fadhiya Xildhibaannada kala ah:
HOP#010: Cabdirisaaq Axmed Maxamed (Jindi).
HOP#030: Daahir Amiin Jeesow oo qaatay shahaadada musharaxnimada.
HOP#066: Cumar Cismaan Waasuge oo qaatay shahaadada musharaxnimada.
Afhayeenka Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee heer Federaal Axmed Safiina oo xalay waqti dambe la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in la saxay khaladaad ka jiray habraaca Ergada sidaas awgeed Doorashada kuraastaas dib loo fasaxay inkasta oo xaanshida hakinta aan laga saarin bogga FEIT.
“Annaga oo ah Guddiga Doorashooyinka heer Federaal waxa aan bulshada Soomaaliyeed, Ergada & musharixiinta ku tartamaya HOP#010, HOP#30 & HOP#066 ku wargelineynaa in la saxay habraaca qayb ahaan u dhinneed kaddib markii aan go’aansanay in la shaqeeyo xili habeen ah loona dhammeystiray, Doorashadu waxa ay dhaceysaa Salaadda Duhur kaddib sidaas awgeed musharixiintu waa in ay usoo diyaar-garoobaan” Sidaasi waxaa Warbaahinta u sheegay Axmed Safiina.
Previous articleDowlada Koofur Kalbeed oo shaacisay liiska kuraas 7 ah
Next articleGuddiga doorashada dadban ee Puntland oo laga sugayo lixdii kursi ee u dambaysay
maxaa looga hadli doonaa kulanka golaha shacabka ay maanta muqdisho ku...
Giuseppe Conte: Ra’iisul Wasaaraha Talyaaniga oo is-casilay